Imaatinka Duufaanta Talim waxay qasbaysaa daad gureynta in kabadan 600 kun oo qof oo ku nool Japan | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ku jirnaa dhowr bilood halkaas oo badweynta Atlantika iyo Baasifigga ay ku yaalliin duufaanno dhowr ah oo aad u daran sannadkan. Heerkulka biyuhu wuxuu siinayaa xoog weyn duufaannada, oo loo yaqaanno duufaannada Aasiya, mana aha wax lala yaabo haddii, markii waqtigu dhammaado, ay sii kordhayaan.
Goor aan fogayn ayaan ka hadlaynay Irma, Duufaan Nooca 5aad ah oo waxyeello weyn geysatay markii ay sii dhex mareysay Caribbean-ka iyo Florida. Hagaag, sida haddii ay ahayd filim cabsi leh, hadda waa Japan oo ah inay qaaddo tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta dadkeeda, tan iyo Duufaanta Talim waxay kusocotaa inay noqoto 'Irma »Jabbaan.
Duufaanta Talim, 3-keedii ee xilli duufaantii Baasifigga, oo kusii xoogeysaneysay Badda Shiinaha 11-dii maalmood ee ugu dambeysay, waxay soo caga dhigatay Japan shalay 30:2.30 waqtiga maxalliga ah (XNUMX GMT) magaalada Minami-kyushu, cirifka koonfureed ee jasiiradda koonfureed ee Kyushu. Halkaas, waxay reebtay roobab mahiigaan ah iyo dabaylo ka badan 130km / saacaddii.
Amniga, waxay soo saartay amar lagu daad gureynayo 448 qof oo ku sugan aagag kala duwan oo ka tirsan magaalooyinka Kumamoto iyo Myzaki, iyo qiyaastii 640.000 oo ku nool magaalooyinka kale ee jasiiradaha.. Waxay ahayd inay sameeyaan: duufaanta, oo ku socota qiyaastii 30km / h jihada waqooyi-bari ee ku wajahan jasiiradda Shikoku, waxay gaari doontaa magaalada Nichinan, koonfur-bari ee jasiiradda Kysuhu 13.50:4.50 pm waqtiga maxalliga ah (XNUMX GMT).
1 Khasaaraha ilaa iyo hada sababay
2 Raadraaca Duufaanta Talim
Khasaaraha ilaa iyo hada sababay
Sawir - Ichiro Ohara / AP
Waqtigan la joogo, in ka badan 770 duulimaadyo gudaha ah waa in la joojiyaa, iyo qaybo xawaare sare leh, iyo sidoo kale tareenka maxalliga ah iyo adeegga doonta ayaa la joojiyay. Qeybta koonfureed ee dalka ayaa weli ku jirta feejignaan roobab culus, daadad iyo dhul go ’Intaas waxaa sii dheer hirarka dhaadheer ee duufaanta ay sababi karto.
Raadraaca Duufaanta Talim
Sawir - Shaashad laga soo qaaday Cyclocane.com
Duufaan Talim la filayo inuu u socdo waqooyi-bari, halkaas oo ay u badan tahay inuu taabto qaybo ka mid ah galbeedka Jasiiradda Honshu ka hor intaanay ka sii tallaabin badda Japan, halkaasoo uu imaan lahaa Hokkaido Isniinta.
Dhanka kale, waxaa la filayaa inuu baxo roobab tiro badan ficil ahaan jasiiradaha oo dhan: 350 milimitir waqooyiga jasiiradda Kyushu, Shikoku iyo gobolka Kinki; 250 milimitir koonfurta Kysuhu, gobolka Chugoku iyo Tokai, iyo 200 milimitir gobolka Kanto-Koshin.
Wixii war ah ee kusoo kordha waan idinla socodsiin doonaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Imaatinka Typhoon Talim ee Japan ayaa qasbaya daad gureynta in kabadan 600 kun oo qof